တရုတ်နိုင်ငံ၏ အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် ကိုဗစ်-19 ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားနေစဉ် ပြောင်းလဲလာသည့် ကမ္ဘာကြီးနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ် အောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲ - Xinhua News Agency
ဆန်းကျန့်၊ ကွမ်တုန်း ဇန်နဝါရီ ၂၆ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ၏ အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် ကိုဗစ်-19 ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားနေစဉ် ငွေကြေးအထောက်အပံ့ အကူအညီအမျိုးမျိုးနှင့် လျင်မြန်စွာပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုက်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း ဆန်းကျန့် မြို့က အရုပ်လက်လီရောင်းချသူ၏ ဇာတ်ကြောင်းကို ဆက်လက်ကြည့်ရှုရအောင်ပါ။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ လက်လီဖြန့်ချီရောင်းချမှုများသည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် အထိနာခဲ့သည်။ နိုင်ငံတော်စာရင်းဇယား ဗျူရိုအဖွဲ့၏ အချက်အလက်တွေအရ အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများသည် ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားချိန်တွင် အခက်အခဲများနှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။
၎င်းတို့အထဲတွင် တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း ဆန်းကျန့် မြို့တွင် အခြေစိုက် (Taihua)တိုင်ဟွာ အရုပ်ကုမ္ပဏီ လည်း အပါအ၀င်ဖြစ်ပါသည်။
“ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါကြောင့် အဲဒီအချိန်တုန်းက ကုန်စည်တွေထည့်ဖို့ ကွန်တိန်နာတွေရဖို့တောင် ကျွန်တော်တို့အတွက် ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။
၀ယ်ယူသူတွေမှာတဲ့ ကုန်တွေကို သင်္ဘော နဲ့တင်မပေးနိုင်ခဲ့ဘူး။ တချို့ကုန်တွေကို ဂိုထောင်ထဲမှာပဲ ထားရပြီး တချို့ကိုတော့ အကောက်ခွန်ရုံးတွေထဲမှာပဲ ထားရပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကွန်တိန်နာနဲ့သင်္ဘောတွေ မရှိလို့ပါ။
ငွေရေးကြေးရေး အခြေအနေကလည်း အရမ်းကြပ်တယ်။
ပြည်သူအားလုံးအတွက်ပေးတဲ့ ဘဏ္ဍာရေးအထောက်အပံ့အကူအညီကြောင့်၂၀၂၁ ခုနှစ် အစောပိုင်းမှာ ကုမ္ပဏီက အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၄၇၀,၀၀၀) ချေးယူရရှိခဲ့ပါတယ်။
၂၀၂၁ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှာ ၊ ချေးငွေရရှိဖို့ လိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေ တင်သွင်းခဲ့တယ်။
တရုတ် လနှစ်သစ်ကူးချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ လိုအပ်တဲ့ ငွေကြေးအထောက်အပံ့ ရရှိခဲ့ပါတယ် ။
စာရွက်စာတမ်းတွေတင်ပြီး သုံးလေးရက်လောက်အကြာမှာ ကနဦးချေးငွေ ယွမ် ၃ သန်းရပြီလို့ ကျွန်တော်တို့ကို ဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားတယ်။
နောက်နှစ်ရက်ကြာတော့ ကျွန်တော်တို့ကို စာချုပ်မှာ လက်မှတ်ထိုးဖို့ ဆင့်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။
မနက်ပိုင်းမှာ လက်မှတ်ထိုးဖို့ သွားခဲ့ပြီး ညနေ ၅နာရီ ၊ ၆နာရီလောက်မှာ ချေးငွေတွေ လက်၀ယ်ရရှိခဲ့တယ်။
မြန်ဆန်သည့် ချေးငွေရရှိမှုအပါအ၀င် ငွေကြေးနှင့် ကုန်ထုတ်ပစ္စည်း အထောက်အပံ့များကြောင့် တိုင်ဟွာအရုပ်လုပ်ငန်းသည် ဆေးသုတ်စက်များ၊ ဖြတ်စက်များ စသည့် ပစ္စည်းကိရိယာများ၀ယ်ယူပြီး ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းကို ပိုပြီး မြှင့်တင်နိုင်ခဲ့သည်။
တိုင်ဟွာအရုပ်လုပ်ငန်း၏ လစဉ်အော်ဒါများသည် ယခုဆိုလျှင် သုံးသိန်း နှင့် ခြောက်သိန်းကြား ရှိသည်။
သူတို့သည် ပေကျင်းဆောင်းရာသီ အိုလံပစ် နှင့် မသန်စွမ်း အားကစားပွဲများ၏
လာဘ်ကောင်အရုပ်အော်ဒါအတွက် လေလံပွဲတွင်လည်း အနိုင်ရခဲ့သည်။
အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ပိုမို ထောက်ပံ့ပေးရန် လိုအပ်သည်။ ထိုလုပ်ငန်းများသည် တိုင်းပြည်၏ လူဦးရေ ၈၀ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကို အလုပ်အကိုင်များ ထောက်ပံ့ပေးနေသည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် နိုင်ငံတော်ကောင်စီ၏ စီမံခန့်ခွဲရေးအစည်းအဝေးအရ ၂၀၂၃ ခုနှစ် နှစ်အကုန်တွင် အခွန်မြှင့်တင်ခြင်း နှင့် အခကြေးငွေ ဖြတ်တောက်ခြင်းကို တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်သွားရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။(Xinhua)
GLOBALink | China’s small and medium firms adapt toachanging world amid COVID-19
China’s small and medium-sized firms are quickly adapting toachanging world amid COVID-19 with the help of various financial support. Click more for the story ofatoy retailer in south China’s Shenzhen. #GLOBALink